Sarri oo ka hadlay mustaqbalkiisa iyo kan Hazard ee kooxda Chelsea, kaddib markii ay ku guuleysteen Europa League – Gool FM
Sarri oo ka hadlay mustaqbalkiisa iyo kan Hazard ee kooxda Chelsea, kaddib markii ay ku guuleysteen Europa League
(Yurub) 30 Maajo 2019. Macalinka kooxda Chelsea ee Maurizio Sarri ayaa xaqiijiyay inay qaateen xili ciyaareed aan cadi ahayn ee cajiib ah, kaddib markii ay xalay kaga guuleysteen Arsenal koobka UEFA Europa League.
Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa ku guuleystay xilli ciyaareedkan 2018-19, koobka Europa League kaddib markii ay 4-1 ku garaaceen xalay kulankii Final-ka ahaa dhigooda Arsenal.
Ciyaarta kaddib ayuu macalinka reer Talyaani ee Maurizio Sarri wareysi uu ku bixiyay shabakada caanka ah ee “Sky Sports” wuxuu ku sheegay:
“Waxaan sameynay xilli ciyaareed wanaagsan, waxaan xaqiijinay ka qeyb galkeena tartanka Champions League ee xili ciyaareedka soo socda, kaddib markii aan kaalinta 3-aad kaga dhameysanay horyaalka Premier League, mana ahan wax fudud marka aad eegto heerka sare ee tartanka”.
“Waxaan gaarnay finalka Carabao Cup, waxaan kasoo gudubnay kooxaha Tottenham iyo Liverpool, balse waxaan guuldaro rigoorayaal ah kala kulanay Manchester City”.
“Tartanka Europa League waxaan soo guuleysanay 12 kulan, waxaana barbaro galnay 3 kulan, kahor inta aanan ku guuleysanin koobka, waxaanahay kooxda goolasha ugu badan ka soo dhalisay tartankan, kaddib waxaan kulankii finalka ahaa kaga adkaanay 4-1 koox aad u adag”.
Intaas kaddib Maurizio Sarri ayaa wuxuu ka hadlay suurtagalnimada uu Eden Hazard kaga dhaqaaqi karo kooxda Chelsea wuxuuna yiri:
“Waan ka xumahay, sababtoo ah wuu baxayaa, waa ciyaaryahan aan caadi aheyn, wuxuu xiiseenayaa inuu horumar sii sameeyo”.
“Ma aqaano hadii aan anigu ka tagayo kooxda, waxaan u maleynayaa inay tahay waqtigii loogu talagalay dabaaldegga, waxaan waydiisan doonaa maamulka inuu hagaajiyo waxyaabaha qaarkood waana dhagaysan doonaa, waxa ay codsanayaan si wax loo wanaajiyo, waxaan haystaa heshiis labo sano ah”.
Kooxda Chelsea oo ku guuleysatay UEFA Europa League, kaddib markii ay garaacday Arsenal… + SAWIRRO
Eden Hazard oo saxaafadda siiyay wareysi go'aamiyay mustaqbalkiisa Chelsea - Miyuu ka baxayaa Stamford Bridge?